Maamuuska Amiir Philip: Qoyska Boqortooyada oo ka warramay nolosha amiirka - BBC News Somali
Maamuuska Amiir Philip: Qoyska Boqortooyada oo ka warramay nolosha amiirka
Carruurta Amiirka Edinburgh ayaa ka sheekeeyay nolosha aabbahood, iyo "waxyaabihii cajiibka" ahaa iyo waxa lagu xusuusto.
Amiirka Wales ayaa BBC u sheegay "tamarta uu u hayay caawinta hooyadey aad ayay cajiib u ahayd, iyo inuu sidaas sameynayay muddo dheer".
"Mar walba garabkeeda ayuu taagnaa wuxuuna ahaa tiir nolosha Boqoradda ka mid ah," ayuu yiri Amiirka Wessex.
"Sida qoysaska kale waqtigan, waalididintaadu shaqo ayay aadeen maalintii balse fiidkii - si la mid ah qoysaska kale - waan isku imaan jirnay, fadhiga ayaan fadhiisan jirnay koox ahaan sheekooyin ayuuna noo akhrin jiray," ayuu yiri Amiir Andrew.
Qoyska Boqortooyada ayaa ka hadlayay wareysi lala yeeshay oo lagu xusayay geerida Amiirka Edinburgh, kaas oo qeyb ka ah barnaamijka gaarka ah ee BBC-da ee lagu wareysanayo "dadka sida fiican u yaqaannay".
Amiir Charles ayaa barnaamijka u sheegay: "Waxaan u maleynayaa inuu jeclaan lahaa in lagu xusuusto sida shakhsi leh xorriyaddiisa gaarka u ah."
Xigashada Sawirka, BBC Studios Events
Mar uu ka sheekeynayay sidii adkeyd ee aabbihiis uu ku soo barbaaray kaddib markii ay qoyskiisu dibadjoog noqdeen, wuxuu yiri: "Ma noqon karto mid fudud noloshuna waxay ahayd hubanti la'aan qof walbana dad kale ayuu caawinaad ka sugayay - waxaana qiyaasayaa inuu ku qasbanaa inuu cagihiisa isu taago."
Barbaarintan hubanti la'aanta ku dhisneyd ayaa gayeysiisay "awoodda aan caadiga ahayn" ee ah inuu noqdo qof dhanka wanaagsan wax ka eega horena u socda, ayay tiri Amiirad Anne.
Taariikh nololeedka Prince Philip, Amiirka Edinburgh
Ka soo wareegidda Ciidamada Badda Boqortooyada una wareego boqortooyada waxay ahayd "loollan adag", ayay tiri Amiirad Anne. "Ciidamada Badda Boqortooyada wuxuu u qaabilsanaa maraakiibta, wuxuu sameynayay dhammaan go'aannada. Noloshiisii xigtay, go'aanno yar ayuu gaarayay."
Balse Amiir Andrew, oo ciidamada badda la shaqeynayay xilligii Dagaalkii Falklands, ayaa sheegay inuusan weligiis aabbihiis kala sheekeysan haddii uu la sii shaqeyn lahaa ciidamada badda iyo in kale. "Wuxuu doorkiisa u arkayay taageeridda Boqoradda," ayuu amiirku yiri.
Amiirad Anne ayaa ka hadashay sidii uu ugu qanacsanaa caawinta Boqoradda "mar walba wuxuu u muuqday mid jooga" muhiim ayayna ahayd sababtoo ah waxay Boqorad noqotay ayadoo aad u yar.
"Waxay u baahnaayeen inay labo jibbaaraan shaqooyinkooda xilligaas si ay ugu suurto gasho inay xilkaas qabato," ayay tiri.
"Aabbahay wuxuu hooyadiis ku yiri, balse u kaadi, sideen weligeen u booqan doonnaa qabrigaaga?" Amiirka Wales ayaa hadalkaas dib u xusuustay. "waxay ku jawaabtay, ha doqomoobin, waxaa jira bas ka soo baxaya Athens."
Gabadha lacagta ku qaadata ololeyaasha doorashada balse aan codeyn
41 Daqiiqadood ka hor